December 2019 - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
MPT / Telenor / Ooredoo တို့အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (လိုအပ်လာလျှင်အသုံပြုဖို့ Share ထားသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ)
MPT ****** -> ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ *222*လက္ခံမည့္ဖုန္းနံပါတ္#call -> ေဘလႊဲရန္ *223*ေငြပမာဏ*လပ္ခံမည့္ဖုန္း#call -> ေဘစစ္ရန္...
MPT / Telenor / Ooredoo တို့အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (လိုအပ်လာလျှင်အသုံပြုဖို့ Share ထားသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ) Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 4:04 PM Rating:5MPT ****** -> ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ *222*လက္ခံမည့္ဖုန္းနံပါတ္#call -> ေဘလႊဲရန္ *223*ေငြပမာဏ*လပ္ခံမည့္ဖုန္း#call -> ေဘစစ္ရန္...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 4:04 PM No comments:
ဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းအာဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
[Zawgyi] ၿဖင့္ဖတ္ရန္ Android ဖုန္းကို Rootလုပ္တဲ႔အတြက္ ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ၆ခုကို မ်ွေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ 1. Total Control Over System...
ဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းအာဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 3:47 PM Rating:5[Zawgyi] ၿဖင့္ဖတ္ရန္ Android ဖုန္းကို Rootလုပ္တဲ႔အတြက္ ရရွိလာမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ၆ခုကို မ်ွေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ 1. Total Control Over System...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 3:47 PM No comments:
[Zawgyi] ၿဖင္႔ဖတ္ရန္ ကြန္ျပဴတာဆိုတာဟာ ကုိယ့္အတြက္အလြန္အသံုးဝင္တဲ့အရာတစ္ခုဆိုေပမယ့္ အသံုးဝင္ေအာင္သံုးတတ္ဖို႔လို ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြန္ျပဴတာတစ...
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:12 AM Rating:5[Zawgyi] ၿဖင္႔ဖတ္ရန္ ကြန္ျပဴတာဆိုတာဟာ ကုိယ့္အတြက္အလြန္အသံုးဝင္တဲ့အရာတစ္ခုဆိုေပမယ့္ အသံုးဝင္ေအာင္သံုးတတ္ဖို႔လို ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြန္ျပဴတာတစ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 11:12 AM No comments:
Internet ထဲဒေါင်းတဲ့ Files တွေ SD ထဲအော်တိုဝင်အောင်လုပ်နည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••အင်တာနက်မှ ဒေါင်းတဲ့ သီချင်း၊ဗီဒီအို၊ ဆော့ဝဲနှင့်အခြားသောdata File တွေ download လုပ်ရင် ဖုန်းထဲမဝင်ဘဲ sd card ကဒ...
Internet ထဲဒေါင်းတဲ့ Files တွေ SD ထဲအော်တိုဝင်အောင်လုပ်နည်း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:09 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••အင်တာနက်မှ ဒေါင်းတဲ့ သီချင်း၊ဗီဒီအို၊ ဆော့ဝဲနှင့်အခြားသောdata File တွေ download လုပ်ရင် ဖုန်းထဲမဝင်ဘဲ sd card ကဒ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 11:09 AM No comments:
iPhone & iPad မ်ားတြင္ iCloud ၀င္ထားျခင္းရွိ မရွိစစ္ေဆးနည္း
iCloud ရွိ မရွိစစ္ေဆးနည္း ================ - iCloud ဆိုတာကေတာ့ Apple Company ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႕၏ Product ေတြျဖ...
iPhone & iPad မ်ားတြင္ iCloud ၀င္ထားျခင္းရွိ မရွိစစ္ေဆးနည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 12:11 PM Rating:5iCloud ရွိ မရွိစစ္ေဆးနည္း ================ - iCloud ဆိုတာကေတာ့ Apple Company ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႕၏ Product ေတြျဖ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 12:11 PM No comments:
[Unicode]ဖတ်ရန် လူတိုင်းကြုံဖူးသော ရုတ်တရက်ကားအင်ဂျင်စက် နှိုးမရသော ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များကို ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာနည်း ရ...
ကားရှိသူ ကားမောင်းသူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လက်ဆောင်…. ရုတ်တရက် စက် နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းချက်များကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့်နည်း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:55 AM Rating:5[Unicode]ဖတ်ရန် လူတိုင်းကြုံဖူးသော ရုတ်တရက်ကားအင်ဂျင်စက် နှိုးမရသော ပြဿနာနှင့် ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များကို ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာနည်း ရ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 11:55 AM No comments:
[Unicode]ဖတ်ရန် အဲကွန်း Remote Control ကနေအပူချိန်ကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့၁၆သို့မဟုတ်၁၈ဒီဂရီလောက်ထားလိုက်ရင်၂၅ဒီဂရီမှာထားတာထက် ပိုအေးတ...
အဲကွန်းလည်းဖွင့်ချင်တယ် မီတာခလည်း သက်သာချင်သူ များအတွက် Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 3:14 PM Rating:5[Unicode]ဖတ်ရန် အဲကွန်း Remote Control ကနေအပူချိန်ကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့၁၆သို့မဟုတ်၁၈ဒီဂရီလောက်ထားလိုက်ရင်၂၅ဒီဂရီမှာထားတာထက် ပိုအေးတ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 3:14 PM No comments:
[Unicode]ဖတ်ရန် Virus အမျိုးမျိုးသတ်နည်း SVCHOST.EXE သတ်နည်း SVCHOST.EXE က Flash Drive များမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာဆီသို့ အချိန်မရွေး ရေ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 3:04 PM No comments: